कोपिला - कान्तिपुर समाचार
साथी सदीक्षा शर्मा स्थानीय एफएम रेडियोमा ‘समता’ कार्यक्रम चलाउँछिन् । उनी बालबालिकाले प्रस्तुत गरेका विषयलाई रेडियोमार्फत सबैलाई सुनाउँछिन् । ‘साथीहरूले दु:ख गरी तयार पारेका प्रस्तुति अरूका लागि पनि उपयोगी हुन्छन्,’’’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले रेडियो कार्यक्रमबाट सबैसामु पुर्‍याइरहेका छौं । यसले अरू बालबालिकालाई पनि उत्साही बनाइरहेको छ ।’’ ।
पक्कु र दर
प्रभा तिमीले होमवर्क सक्यौ ?’‘तिमीले ?’‘तिमीले के गर्‍यौ, पैले तिमी भन न ।’ ‘मैले त छैन । ममी मामाघर गइस्यो । बाबाले जानिसिन्न । कसरी सक्नु नि होमवर्क ?’‘त्यसो होइन क्या, बाबालाई सोधन, जानिसिन्छ होला । मैले त सकें नि, बाबामामु दुवैले सिकाइस्या ।’ भदौको एक बिहान प्रभा र आभाले यसरी गफ गरे ।
दिमागबारे १० तथ्य
१. मानिसको मस्तिष्कले कति सम्झन सक्छ भन्ने कुराको कुनै सीमा हुँदैन । २. मानिसको ‘सर्ट टर्म मेमोरी’ ले थोरै जानकारीहरू मात्र सम्झन सक्छ ।
दिउँसोभरि समय देखाउनेकाम गर्छ यसले हामीलाईधेरै महत्त्व हुन्छयसको हामी सबैलाई ।।
मेरो सानो गाउँकति सुन्दर ठाउँफूलबारी त्यसको नाउँ ।।
हाम्रो घरको छानामा राम्रो चरी आएको मैले पापा दिएकोमीठो मानी खाएको
ह्रस्व–दीर्घ सिकौं बरिलै...
नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपालका १ सय २५ जातजातिको सम्पर्क भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा पनि यही हो । यो देवनागरी लिपिमा लेखिन्छ । व्याकरणअनुसार नेपालीमा ह्रस्व र दीर्घ लेख्ने नियम छन् ।
नेपाललाई ४ जात २६ वर्णको साझा फूलबारी मानिन्छ । यसले हाम्रो जातजातिका साथै भाषा–संस्कृति र धार्मिक विविधतालाई झल्काउँछ । अनेकतामा एकता भएको हाम्रो देशमा वर्षभरि धेरै चाड पर्व मनाइन्छ ।
सानैमा ठूलो पर्दा
आयुब सेन ७ वर्षका भए । उनी राजधानीको एक स्कुलमा कक्षा ३ मा पढ्छन् । सात वर्षको उमेरमै ‘मेरी मामु’ चलचित्रमा प्रमुख भूमिका निभाएकाले यति बेला उनको चर्चा बढिरहेको छ । चलचित्रमा अभिनय गर्ने रुचिसँगै चलचित्र निर्माता बुबा सन्तोष सेनको सहयोगका कारण सानो उमेरमै उनले ठूलो पर्दामा देखिने अवसर पाएका हुन् ।
सुरी र कुती
अवतार अहिले चार वर्षका भए । उनलाई कुकुर, बिरालो, खरायो, चराचुरुंगी एकदम मन पर्छ । उनको घरको बिरालो र कुुकुरले छाउरा पाएको दिन अवतार एकदम खुसी भए ।
एकले अर्कालाई कतैजान्नन् कहिल्यै छोडी,मिलीजुली बस्छन् सधैं ढुकुरका जोडी ।
साउन–भदौ वर्षा ऋतुधेरै पानी पर्छ ।यो बेलामा स्कुल जान गाह्रो हुने गर्छ ।
निहुँ खोज्दै लाम्खुट्टे
निहुँ खोज्दै लाम्खुट्टे आउँछ कोठामाकोठाबाट निस्केर जान्छ ग‍ोठमा
मकैको अर्कै खेती !
हाम्रो स्कुलमा एक वर्ष नेपाली र एक वर्ष अंग्रेजी नाटक मञ्चन गर्ने परम्परा बसाएको छ । त्यसैअनुसार यस वर्ष नेपाली विभागले सञ्जीव उप्रेतीद्वारा रचित नाटक ‘मकैको अर्कै खेती’ को मञ्चन गर्ने निर्णय गर्‍यो । लगत्तै पात्रहरू छानियौं । हरेकको भूमिका तय भयो ।
तीन वर्ष, तीन जाँच, आउन नदिऔं,बच्चाको आँखामा कुनै आँच नानीबाबुको आँखामा रोग लाग्न नदिन मोरङ र सुनसरीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालित अभियानको नारा हो यो । सीमावर्ती रानीस्थित विराटनगर आँखा अस्पतालले स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला समन्वय समिति, जनस्वास्थ्य कार्यालय, आफ्नै केन्द्रहरू र भीडभाड हुने थलोमा यो जनचेतनामूलक सामग्री टाँसेको छ ।
हातैले लेखौं– धन्यवाद !
हालसालै तिमीले कसैलाई हातैले केही लेखेर पठाएका छौ ? छौ भने, त्यसमा ‘धन्यवाद’ लेखेका थियौ कि थिएनौं ? थिएनौ भने, जानिराख हस्तलिखित धन्यवादका कुरा । यी कुरा साइकोलजिकल साइन्स जर्नलमा प्रकाशित लेखमा आधारित हुन् ।इन्टरनेटको विकास हुनुपूर्व पत्र प्राय: हातैले लेखिन्थ्यो ।
शान्तदास मानन्धर बालसाहित्यका हुन् । उनी अहिले ८५ वर्षका भए । यो उमेरमा पनि उनी बालसाहित्य लेखन र सम्पादनमा एकदमै सक्रिय छन् । उनले बालसाहित्यमा कलम चलाउन थालेकै ६० वर्ष भइसक्यो । उनका दुई दर्जन जति बालसाहित्यका किताब प्रकाशित छन् । दुई सयभन्दा बढी बालसाहित्यकै पुस्तक सम्पादन गरेका छन् ।